Fahirano ny Boralus - Torolàlana PVE | Game Guide, tranomaizina | WoW Guides | WoW Guides
Siege of Boralus - Torolàlana PVE
Adriel Diaz | | Game Guide, Tranomaizina
Hey tsara! Manao ahoana ianao amin'ny fanitarana vaovao? Androany izahay te-hitondra anao ity torolàlana ity amin'ny iray amin'ireo trano-maizina vaovao any Battle for Azeroth, Siege of Boralus, miaraka amin'ny mpiara-miasa aminay Yuki sy Zashy. Andao tonga any amin'ny teboka!
Fahirano an'i Boralus
Siege of Boralus dia iray amin'ireo trano-maizina vaovao natolotra niaraka tamin'ny fanitarana vaovao an'ny World of Warcraft Battle ho an'i Azeroth, trano-maizina izay hita ao amin'ny Selat Tiragarde.
Ny governora Lady dia namoaka ny fahatezerany manoloana ny fihenan'ny fiarovana an-drenivohitra. Ny fandoroana an'i Boralus sy vondron'olona mahery fo vitsivitsy dia tsy maintsy miatrika ny korontana mitombo ary mamarana ny drafitry ny Governemanta hanjakazaka amin'ny faritra.
Ity tranomaizina ity dia manana boss 4 hafa ary amin'ny fahasarotana Mythic ary, tsy toy ny tranomaizina hafa, ity iray ity dia tsy manome fiakarana.
Alohan'ny hanombohana ny torolàlana feno amin'ity tranomaizina ity, te hampahafantatra anao izahay fa azo atao ity torolàlana ity noho ny fiaraha-miasa Yuki y zashi.
Ity ny torolàlana feno ho an'ny Siege of Boralus:
Raha tsy misy ado hafa dia andao hanomboka amin'ny tari-dalan'ny boss.
El Sergeant Bainbridge(HORDE) / Redhook Cutter(ALIANZA) dia manamboninahitra hentitra izay manamafy mafy ny fari-pitsipiny tsy azo vakiana. Mino izy fa ny fahalemena dia tokony hosazin'ny fahafatesana ary tsy misalasala manantona ireo izay manafintohina azy.
Sergeant Bainbridge dia mamikitra amin'ny fahavalo an-tsokosoko ary manandrana mamandrika azy ireo amin'ny Lasso Hangmanany. Arakaraka ny fahaizan'i Bainbridge manenjika ny fahavalo no mahamaika azy miaraka amin'ny Boiling Wrath.
Rehefa mandeha ny ady, ny tafika Kul Tiras dia manafika ny vondrona satria baomba tsy an-kijanona any an-toerana ny Cannon Barrage.
Ny Artillery mavesatra dia miteraka mandritra ny fipoahana baomba ary, raha tsy nipoaka alohan'ny fotoana dia lany, nipoaka, nanimba ny fety.
Fantsakan'i Hangman -> Tafio-drivotra vy
Fijerena vy -> Fahatezerana mangotraka
Barrage Cannon -> Matihanina mavesatra
Target hafa mandritra ny ady
Kultirana Vanguard -> Tetehina mavesatra
Kultirana markman -> Projectile vy
Aza atao ao anatin'ny kisarisarin'ilay Sergeant Bainbridge mba tsy hiantraikany aminao lanja mavesatra.
Ataovy ny Tetehina mavesatra de Kultirana Vanguard tsy miompana amin'ny vondrona.
Ampita ny Matihanina mavesatra hisorohana azy tsy hanimba ny fety.
Vonoy ny tafik'i Kul Tiras
Rehefa lasibatra ianao Fijerena vy, mandosira faingana.
ny Kultirana markman manimba ny fety manontolo.
Raha ny Matihanina mavesatra mipoaka, hiatrika fahavoazana be dia be amin'ny fety.
Raha vantany vao manomboka ny fihaonana isika dia hahatsapa fa hisy tanjona telo samy hafa amin'ny ady. Amin'ity indray mitoraka ity, ny tena tanjona dia tsy hitovy arakaraka ny hoe avy amin'ny alliance na ilay horde isika.
Sergeant Bainbridge Tsy tanjona azo tratrarina izy io, ka tsy mila miahiahy momba izany isika. Na izany aza, izy roa Vanguard an'i Kul Tiras como el Sniper Sniper Kul Tiran raha tsy maintsy atao tanky izy ireo, na dia amin'ny fotoana rehetra aza dia izy ireo no lohalaharana. Na dia miatrika an'ireto fahavalo roa ireto aza izahay, dia hanisy mpilalao kisendrasendra ny Sergeant Fijerena vy ary hanomboka hanenjika anao, hahazo 5% hafainganam-pandehan'ny hetsika isaky ny roa segondra, miatrika fahasimbana kely raha toa ka mahatratra ny kendreny izany.
Vanguard an'i Kul Tiras tsy maintsy tankina miaraka amin'ny lamosiny mankany amin'ny vondrona nanomboka Tetehina mavesatra Hatairana eo alohany ny mpilalao 4 segondra.
Sniper Sniper Kul Tiran dia hanimba bebe kokoa amin'ny Projectile vy fa tsy misy zava-dehibe ao an-tsaina.
Matetika dia ho tototry ny baomba ny sehatra rehetra Barrage Cannon, miseho ny Matihanina mavesatra Tsy inona izany fa ny baomba mandahatra fotsiny. Ireo dia hipoaka raha lany ny fotoana, miatrika fahasimbana marobe. Mba hisorohana an'io dia nenjehin'ny Sergeant Bainbridge, tsy maintsy manandrana manao azy hihinana ny baomba ianao amin'ny alalàn'izy ireo ambonin'izy ireo, maka isan-jato isan-jato amin'ny fiainana ary manafoana ny marika hafainganam-pandehan'ny hetsika. Baomba marobe no hianjera ary tsy ho azontsika atao ny mihinana azy rehetra ny sergent, ka tsy maintsy diovin'ilay tanky ireo sisa tavela alohan'ny nipoahan'izy ireo mba haniny ny fahavoazany.
Raha ny Alliance dia mitovy ny mekanika. Redhook Cutter tsy tanky, Slasher amin'ny tide vy manao ny frontal tapaka tahaka Vanguard an'i Kul Tiras y Vovoka fitetezana vy handefa ody tsy miova toy ny Sniper Sniper Kul Tiran.
Làlan'ny mpiambina an-dranomasina
Tady mpiambina Cheep
Dock Warden fonon-tanana
Famatoran'ny Zelota tsy azo sakanana
City Watch Stamp
Tsinontsinona ny finoana tsy miovaova
Kapiteny Lockwood mampatahotra
Ny kapiteny Lockwood izay mampihorohoro dia mitarika andiam-basy azerita marobe. Amin'izao fotoana izao dia voaofana ao an-dapa ny basy aman'asan'izy ireo ary mandrahona ny handoro lavenona ny foiben'ny fahefana ao amin'ny House Valiant raha tsy milavo lefona.
Kapiteny Lockwood ratsy fanahy mampiasa Evasive hiverenana hatrany amin'ireo mpilalao, hanafika azy ireo amin'ny Gut Shot.
Rehefa feno ny herin'ny heriny dia mampiasa Retreat izy hiverina any amin'ny sambony, ary manafika ny vondrona ny ekipany satria mahazo ny Terrifying Salvage mitohy hatrany ilay faritra.
Ny Artillery tsy miorina dia tsy maintsy ampiasaina hanapoahana ny sambon'ny kapiteny Lockwood ary hamerina azy any amin'ny ady.
Fialana -> Voatifitra tao amin'ny tsinay
Hamafa ny tokotanin-tsambo
Ashvane Deck Sailor -> Crimson scourge
Aspafresno Gunboat -> Barrage / Artillery tsy marin-toerana
Apetraho ny Ashvane Deck Sailor miaraka amin'ny lamosinao amin'ny vondrona rehefa manipy ianao Crimson scourge.
Evita Hamafa ny tokotanin-tsambo.
Raiso ny Artillery tsy marin-toerana ary ampiasao hanimba ny sambo.
Voatifitra tao amin'ny tsinay miatrika fahasimbana mitohy amin'ireo mpikamban'ny antoko tsy mitongilana.
Kapiteny Lockwood ratsy fanahy hanana dingana roa tsy mitovy izy io. Mandritra ny dingana voalohany, hitifitra anay tsy tapaka ny kapiteny ary, amin'ny fotoana sasany, dia hiezaka ny hiala amin'ny tanky mampiasa Fialana ary manipy Voatifitra tao amin'ny tsinay. Hanomboka hatrany izany mandra-piverin'ny tanky amin'ny mozika.
Hihemotra any amin'ny sambony ny kapiteny rehefa tonga amin'ny angovo 100 izy ary fahavalo maromaro no hita eo amin'ny ady. Na dia manandrana manangona azy ireo aza ny tanky, dia tsy maintsy mihodina isika Mitsitsia mampatahotra, manamarika toerana maromaro eny an-tsehatra. Anisan'ireo fahavalo hita mandritra ny kapiteny ny kapiteny, hanana ny Ashvane Deck Sailor mampiasa Crimson scourge, frontal iray izay mitondra fahasimbana betsaka sy ny Aspafresno Gunboat mampiasa Barrage y Artillery tsy marin-toerana.
Vantany vao nopotehinay daholo ny zanaky ny tranony ary indrindra ny Aspafresno Gunboat, ity dia handatsaka ny tafondro ary hampiasaintsika hanohitra ny kapiteny hiverina any amin'ny faritra mpiady.
Ka mandrapaha resy.
Harbor Raider Belt
Gauntlets misy marika amin'ny tady
Fehikibo fitaovana vy
Leggings an'ny gidro basy
Saber an'ny piraty Lockwood mampatahotra
Matahotra ny kapitenin'ny vy
Mpitady Vovoka Kapiteny
Sabatra azo antoka fa manitsaka
Hadal Shadowbraces dia olona goavambe taloha izay nantsoina avy tany amin'ny lalina mba hamoaka ny fahatezerany amin'i Boralus. Noho ny heriny lehibe, manorotoro ny tranobe, ny sarivongana ary ny sivily izy.
Hadal Shadowfathom dia miteraka fipoahan'ny rano any amin'ny toerana misy ny fahavalo miaraka amin'ny Water Rupture. Ireo fipoahana ireo dia mamorona farihy misy brine manerana ny faritra.
Rehefa feno angovo i Hadal dia mamoaka herin'ny onja.
Tondra-drano > Voadio brine
ataovy izay Tondra-drano tsy miompana amin'ny vondrona.
Ampiasao ny sarivongana hialana Herin'ny onja.
Vaky rano manimba ny rehetra.
Tsotra tokoa ity ady ity. Voalohany, hampiasa ny sefo Tondra-drano, manao anoloana somary matanjaka ary mamela vitsivitsy Voadio brine amin'ny faritra voafantina. Tsy maintsy hialantsika io fanafihana io ary noho izany, ny tanky dia tsy maintsy mitazona ny sefony hiatrika ny vondrona. Amin'ny toerana faharoa, Vaky rano hiantso Voadio brine eo ambanin'ny tongotry ny mpilalao kisendrasendra. Tsy lazaina intsony fa tsy maintsy hialana ilay puddle satria miatrika fahasimbana betsaka.
Rehefa mahatratra teboka angovo 100 dia handroaka ny sefo Herin'ny onja, miantso onjan-dranomasina onja izay hitety ny dingana manontolo hatrany amin'ny lafiny iray. Hiteraka fahavoazana be dia be izany raha mikasika azy io isika, mba hisorohana azy, tsy hijoro ao ambadiky ny sary afovoan'ilay fihaonana fotsiny isika.
Claw Submersible voaroaka
Tarika Dredger fahiny
Fehikibo rojo vy
Viq'Goth nantsoin'ny Lady Governora avy any amin'ny lalina izy ary nandrava ny seranan-tsambo. Izy io dia leviatana afaka mitarika galleons manontolo mankany amin'ny ranomasina ary tsy maintsy vonoina alohan'ny handringanana ny andian-tsambon'i Kul Tiras iray manontolo.
Tsy maintsy avotana ireo injenieran'ny Kul Tiras hanamboarana ireo tafondro vaky. Raha vantany vao amboarina dia azo ampiasaina hamelezana an'i Viq'Goth ireo basy raha simbaina tanteraka.
Viq'goth dia mampiasa Call avy any Deep mba hanafika ny faritra misy ady sy Putrid Waters hiatrehana fahasimbana an'ireo mpikambana ao amin'ny antoko.
Fampihorohoroan'ny lalina > Fampihorohoroana mahery setra > Famihinana mandratra
Miantso avy any amin'ny lalina
Famongorana ny fampihorohoroana > Mpamadika fiarovan-doha / Mirongatra
Fanafihan'i Melee ny fampihorohoroana mba tsy hampiasa azy ireo Mpamadika fiarovan-doha.
Mandresy ny fampihorohoroana mamoaka ny injeniera.
Rano putrid miatrika fahasimbana amin'ireo mpikambana fety sendra.
Viq'Goth lalao hafa somary mahitsy ity. Amin'ity tranga ity, ny tanky dia hikarakara ny fitazonana ny Famongorana ny fampihorohoroana raha ny sisa amin'ny vondrona kosa dia hanafika ny Fampihorohoroana goavana hanafaka ny injeniera ary asaivo amboariny ny tafondro afovoany izay hahafahantsika mandresy ny sefo.
El Famongorana ny fampihorohoroana tsy maintsy manana ny melee tanko foana ianao satria, raha tsy manana olona eo akaiky ianao dia hanimba ny vondrona iray manontolo izany. Mpamadika fiarovan-doha. Ny fanafihanao irery dia Mirongatra, fiatrehana fahasimbana eo alohan'ny tanky sy famerenanana azy.
Raha vao resintsika ny Fampihorohoroana goavana, hanafaka ny injeniera isika ary handeha ho any amin'ny tafondro afovoany hitifitra ny lehibeny, ary hahatratra% ny fahasalamany faratampony.
Raha vantany vao vitantsika izany, dia hivezivezy izy io ary tsy maintsy hanaraka azy eo amoron-tongotra kely iray izay ananantsika ankavia. Raha mankany amin'ny teboka manaraka amin'ny ady isika dia hampiasa ny lehibeny Rano putrid, manimba hatrany ny antoko iray manontolo. Ity vokatra ity dia azo esorina, fa ny fanaovana izany dia hanapoaka ilay mpilalao voakasik'izany, hiatrika ny fahasimban'ny faritra.
Hafa ny fahaizanao hampiasainao Miantso avy any amin'ny lalina, manamarika ireo faritra eny an-tsehatra izay hanimba fahasimbana be rehefa misy fiantraikany.
Raha vantany vao nahavita ity tsingerina ity imbetsaka isika dia handresy ny sefo ary hampitsahatra ny tranomaizina.
Hoop an'ny Leviatana mitaona
Triple Heart Chestguard
Kraken Carapace Pauldrons
Satroboninahitry ny lalina
Fonon-tanana vita amin'ny ahidrano vy
Palitao miafina Cephalopod
Harpooner Plate Hauberk
Crescent misy ravina coral
Ary hatreto dia ity torolàlana mankany amin'ny tranomaizina fahirano an'i Boralus ity. Manantena izahay fa nanompo anao ary, ambonin'izany rehetra izany, misaotra anao indray izahay Yuki y zashi ho an'ny fiaraha-miasa.
Azonao atao ny miditra amin'ny fantsony ao amin'ny YouTube hahitanao ny tohin'ny torolàlana avy amin'ity rohy manaraka ity:
Yuki Series - YouTube
Miarahaba anao avy amin'ny GuidesWoW ary mahery (> ^. ^)> Fihinina <(^. ^ <)!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Siege of Boralus - Torolàlana PVE
Talanji Expedition - Reputation
Fanjakana Zandalarià - Reputation